IELTS ဆိုသည်မှာ IELTS4skills ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်အကြောင်းအရာ
IELTS ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ဖြေဆိုသူအများဆုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော အရည်အချင်းစစ်ဆေးမှုစာမေးပွဲစနစ် (International English Language Testing System) တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာ4skills ဖြစ်သည့် နားထောင်ခြင်း(Listening), စကားပြောခြင်း(Speaking), ဖတ်ခြင်း(Reading), နှင့် ရေးသားခြင်း(Writing)ဟု၍ ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းကို စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖြေဆိုသူတို့၏ အရည်အချင်းအလိုက် Band Scores များကိုတော့ အဆင့်ဆင့်ခွဲခြားထားပြီး အဆင့် 1 မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုလုံးဝမသုံးစွဲနိုင်ခြင်း နှင့် အဆင့်9မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုကောင်းစွာသုံးစွဲနိုင်ခြင်းဟူ၍ သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုခေတ်တွင် IELTS စာမေးပွဲဖြေဆိုရာမှာ ရမှတ်အသုံးပြုလိုခြင်းကိုမူတည်၍ ကွဲပြားသောစာမေးပွဲများရွေးချယ်ဖြေဆိုနိုင်သည်။ ဖြေဆိုသူတို့မှာ မိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်အလျောက် စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ဖြေဆိုနိုင်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အမြဲရင်းနှီးသိကြားလေ့ရှိသော အများအားဖြင့် ကျောင်းဆက်တက်ရန် အတွက်ရမှတ်ကိုအသုံးပြုသည့် IELTS Academic နှင့် အလုပ်လျှောက်ရန်အတွက် ရမှတ်ကိုအသုံပြုသည့် General ဟူ၍ စာမေးပွဲစစ်ဆေးမှုနှစ်မျိုးခွဲခြား သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင် IELTS UKVI ဟု ဗြိတိန်နိုင်ငံ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာလျှောက်ထားရန်မှာ အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး IELTS Life Skills ဟု ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံအဖွဲ့များ ဘက်မှစံသတ်မှတ်စည်းမျဉ်ချက်အရ မိမိအင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားပြော(Speaking) နှင့် နားထောင်ခြင်း(Listening) အဆင့် A1 သို့မဟုတ် B1 ဟူ၍ရှိကြပါသည်။ ဤသို့ကြောင့် စစ်ဆေးရေးအမျိုးပေါင်းများစွာရှိသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဒီကနေ့ IELTS ၏ Academic အပိုင်းကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားကြရအောင်ရှင့်
IELTS တွင်စာမေးပွဲစစ်ဆေးမှု2မျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါသည်
1. ကျောင်းဆက်တက်ဖို့အတွက် (Academic Modules)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို သုံးစွဲသည့် နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်ကျောင်းများတွင် တက္ကသိုလ်ပထမဘွဲ့အဆင့်၊ မဟာဘွဲ့အဆင့် နှင့် ဒေါက်ဒါ ပါရဂူဘွဲ့အဆင့် တို့အပါအဝင် ပညာဆက်တင်ရန်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် စစ်ဆေးရေးစာမေးပွဲဖြစ်ပါသည်။
2. သင်တန်းတက်လေ့ကျင့်ရန်အတွက် (General Training Modules)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို အဓိကသုံးစွဲသည့် နိုင်ငံတကာတွင် အလုပ်လျှောက်လိုသူ၊ သင်တန်းတက်လေ့ကျင့်ရန် သွားလိုသူအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် မေးခွန်းပိုင်းမှာ အခြေခံအဆင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာမျိုးကို စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ဖို့ရန် သက်မှတ်လက်ခံသည့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံ နှင့် အခြားနိုင်ငံသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လိုသူအတွက် သင့်တော်သည့် အင်္ဂလိပ်စွမ်းရည်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
IELTS4skills ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်အကြောင်းအရာ
1.1 နားထောင်ခြင်းအပိုင်းကိုစစ်ဆေးခြင်း( IELTS Listening) 30 မိနစ်
ဖြေဆိုသူသည် CD player စက်မှ အကြောင်းအရာတွေကို နားထောင်ပေးရပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာတွင် စကားစမြည်ပြောခြင်း နှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း မှ အသံထွက်ခြင်းတို့အပါအဝင် ဖြေဆိုသူသည် ထိုတိပ်ခွေကို တစ်ကြိမ်တွင်သာ နားထောင်ခွင့်ရရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း မေးခွန်းဖတ်ရှုခြင်း နှင့် အဖြေရေးချခြင်း အချိန်တို့ရရှိပါသည်။ နောက်ဆုံးပိုင်းအနေဖြင့် Answer Sheet တွင် ဖြေထားသည်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့ရန် အချိန် 10 မိနစ်ရရှိပါသည်။
1.2 ဖတ်ခြင်းအပိုင်းကိုစစ်ဆေးခြင်း ( IELTS Reading) 60 မိနစ်
အကြောင်းအရာ ဆောင်းပါးပေါင်3းပုဒ်ကိုပေးဖတ်မည်ဖြစ်ပြီး အားလုံးရှည်လျားသောဆောင်းပါးမျိုးဖြစ်သည့်အပြင် ရုပ်ပုံ သို့မဟုတ် ဂရပ်များလည်းတွဲပါဝင်ပြီး စာအုပ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းစားများမှ အကြောင်းအရာ ကောက်နုတ်ယူထားခြင်းဖြစ်၍ မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမှ အထူးသက်သက်အလေးပေး ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ အထွေအထွေ အကြောင်းအရာမျိုးသာဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်းပါးပေါင်3းပုဒ်တွင် မေးခွန်းအားလုံးပေါင်း 40 ခုရှိပြီး ဖြေဆိုချိန် 60 မိနစ်ပေးထားပါသည်။ မေးခွန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်ပျမ်းမျှဖြေဆိုချိန်မှာ 1.5 မိနစ်ဖြစ်ပါသည်။ မေးခွန်းပုံစံမှာ အကျဉ်းချုပ်နားလည်သဘောပေါက်အောင် ဖတ်ခြင်းနည်း၊ အကြောင်းအရာ ကောက်ချက်ချ ရယူဖို့ရန် ဖတ်ခြင်းနည်း၊ နှင့် တက္ကဗေဒပိုင်းအရ နားလည်သဘောပေါက်အောင် ဖတ်ပေးရခြင်း ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
1.3 ရေးသားခြင်းအပိုင်းကိုစစ်ဆေးခြင်း ( IELTS Writing) 60 မိနစ်
အကြောင်းအရာ2မျိုးခွဲထား၍ ဖြေဆိုချိန် 60 မိနစ်ပေးထားကာ ပထမအကြောင်းအရာမှာ ပေးထားသော ဂရပ်ပုံစံမျိုး၊ ဇယားပုံစံမျိုး၊ ပုံကြမ်းကားချပ်ပုံစံမျိုးတို့ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းမျိုးအနေဖြင့် ရေးသားဖြေဆိုပေးရပါသည်။ ထူးခြားသော အချက်အလက်အမျိုးမျိုးကို နှိုင်းယှဉ်ပေးရပြီး အနည်းဆုံး စကားလုံး 150 လုံးပါဝင်အောင်ရေးသားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြောင်းအရာမှာ ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ပုံစံမျိုးနှင့် တရားဝင်ပုံစံမျိုး ဖြစ်စေရမည့် စာစီစာကုံးရေးသားခြင်းမျိုး သို့မဟုတ် အစီရင်ခံစာရေးသားခြင်းမျိုး၊ ပေးထားသောခေါင်းစဉ်အရ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် သို့မဟုတ် ပြဿနာဖြေရှင်းချက်ပုံစံမျိုးတို့ကို အနည်းဆုံးစကားလုံး 250 လုံးပါဝင်အောင်ရေးသားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
1.4 စကားပြောခြင်းအပိုင်းကိုစစ်ဆေးခြင်း ( IELTS Speaking) 10-15 မိနစ်
အပိုင်3းပိုင်းခွဲခြားထား၍ ပထမအပိုင်းမှာ နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝ အထွေထွေအကြောင်းအရာကို ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယအပိုင်းမှာ ဒိုင်လူကြီးသည် ဖြေဆိုသူကို မေးခွန်းကဒ်ပြားပေးထားပြီး စကားပြောဆိုခြင်းမပြုခင် ပြင်ဆင်ချိန် 1 မိနစ်ပေးထား၍ ဖြေဆိုသူတစ်ဦးတည်းကိုသာ 3-4 မိနစ်ထိ စကားပြောဆိုခိုင်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးပိုင်းအနေဖြင့် ဒုတိယအပိုင်းမှ ရရှိထားသောအကြောင်းအရာကို အသုံးချ၍ တုံ့ပြန်စကားအဖြစ်မျိုး ပြောဆိုခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
2.1 နားထောင်ခြင်းအပိုင်းကိုစစ်ဆေးခြင်း( IELTS Listening) 30 မိနစ်
ဤအပိုင်းတွင် IELTS Academic စစ်ဆေးခြင်းနည်းနှင့်တူညီနေပြီး ဖြေဆိုသူသည် CD player စက်မှ အကြောင်းအရာတွေကို နားထောင်ပေးရပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာတွင် စကားစမြည်ပြောခြင်း နှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း မှ အသံထွက်ခြင်းတို့အပါအဝင် ဖြေဆိုသူသည် ထိုတိပ်ခွေကို တစ်ကြိမ်တွင်သာ နားထောင်ခွင့်ရရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း အားလုံးပေါင်း4ပုဒ်စကားစမြည်ပြောခြင်းပါဝင်သည်ဖြစ်၍ မေးခွန်းဖတ်ရှုခြင်း နှင့် အဖြေရေးချခြင်း အချိန်တို့ရရှိပါသည်။ နောက်ဆုံးပိုင်းအနေဖြင့် Answer Sheet တွင် ဖြေထားသည်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့ရန် အချိန် 10 မိနစ်ရရှိပါသည်။
2.2 ဖတ်ခြင်းအပိုင်းကိုစစ်ဆေးခြင်း ( IELTS Reading) 60 မိနစ်
အကြောင်းအရာ ဆောင်းပါးပေါင်3းပုဒ်ကိုဖတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး တိုတောင်းသောဆောင်းပါးမျိုး နှင့် ရှည်လျားသောဆောင်းပါးမျိုး ပါဝင်သည့်အပြင် မေးခွန်းမေးထားသည်ကို လိုက်လုပ်ဖြေဆိုပေးရပြီး စာအုပ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းစားများမှ အကြောင်းအရာ ရယူထားခြင်းဖြစ်၍ အကြောင်းအရာတိုင်းသည် အထွေထွေအကြောင်းအရာမျိုးဖြစ်သည့်အပြင် မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမှ အထူးသက်သက်အလေးပေး ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ အထွေအထွေ အကြောင်းအရာမျိုးသာဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်းပါးပေါင်3းပုဒ်တွင် မေးခွန်းအားလုံးပေါင်း 40 ခုရှိပြီး ဖြေဆိုချိန် 60 မိနစ်ပေးထားပါသည်။ မေးခွန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်ပျမ်းမျှဖြေဆိုချိန်မှာ 1.5 မနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ခြုံငုံ၍ပြောရမည်ဆိုလျှင် မေးခွန်းအရေအတွက်သည် IELTS Academic ပုံစံနှင့် တူနေပြီး သို့သော် Academic ထက်ပိုပြီးလွယ်ကူတဲ့ ဖတ်ကြားမေးခွန်းအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါသည်။
2.3 ရေးသားခြင်းအပိုင်းကိုစစ်ဆေးခြင်း ( IELTS Writing) 60 မိနစ်
အဓိကအပိုင်း2ပိုင်းခွဲခြားထားပြီး ဖြေဆိုချိန် 60 မိနစ်ပေးထားပါသည်။ ပထမအပိုင်းမှာ Letter စာ 1 စာင်(စကားလုံးအနည်းဆုံး 150 လုံးပါဝင်ရမည်)ရေးရပြီး၊ နောက်အပိုင်းမှာ တိုတောင်းသော စာစီစာကုံး(စကားလုံးအနည်းဆုံး 250 လုံးပါဝင်ရမည်) ရေးသားရပါသည်။ မေးခွန်းပုစ္ဆာခေါင်းစဉ်ပိုင်းမှာ အထွေထွေ အကြောင်းအရာကိုသာ သက်မှတ်ပေးထား ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီ part ၏ပထမအပိုင်းမှာ အခြေအနေ အနေအထားတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးထားပြီး ဖြေဆိုသူသည် ထိုအနေအထားကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရေးပြရခြင်း (သို့) အချက်အလက်တောင်းဆိုဖို့ရန် Letter စာတစ်စောင်ရေးပြရပါသည်။ ထို Letter စာသည် ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ် မှ တရားဝန်သုံးစွဲနိုင်သည်အထိဖြစ်နိုင်ပြီး သို့မဟုတ် တရားဝန်ရုံးသုံးနိုင်သည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်သည်လည်းရသည်။ နောက်ထက်အပိုင်းကတော့ ဆောင်းပါးလိုရေးသားရန်မှာ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်လိုလို စာစီကုံးရေးသားပေးရ၍ အယူအဆအမြင်သဘောထားကို နှင့် ထင်မြင်ချက်သုံးသပ်ချက်ကိုဖော်ပြစေခြင်းမျိုး (သို့) ဝေဖန်ကန့်ကွက်ခြင်း (သို့) ပြဿနာကို ဖြေရှင်းသည့် အဖြစ်မျိုး တို့ဖြစ်ပါသည်။
2.4 စကားပြောခြင်းအပိုင်းကိုစစ်ဆေးခြင်း ( IELTS Speaking) 10-15 မိနစ်
ဤအပိုင်းတွင် လူတွေ့မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပြီး မေးခွန်းတို နှင့် စကားရှည်ပြောဆိုဖြေကြားရသည့် မေးခွန်းမျိုးလည်းပါဝင်ပါသည်။ မေးမြန်းသည့်ခေါင်းစဉ်ပိုင်းမှာ ရင်းနှီးသောအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပြီး ဤ part ကိုဖြေဆိုရာမှာ အစဉ်လိုက် ရွေးချယ်ဖြေဆိုနိုင်သည့် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သော အထွေထွေအကြောင်းအရာ နှင့် ရင်းနှီးတဲ့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာ မေးခွန်းဖြစ်၍ နောက်ပေးထားလာမည့် မေးခွန်းကဒ်ပြားတစ်ခုထဲတွင် အကြောင်းအရာ သက်သက်ပြောကြားဖြေဆိုပေးရပြီး မဖြေဆိုခင် ပြင်ဆင်ချိန် 1 မိနစ်ပေးထားပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အပိုင်း2မှ ခေါင်းစဉ်ကိုအတည်ပြု၍ မေးခံရပါသည်။ ဤအပိုင်းတွင် သင့်ကို စိတ္တဇနာမ်ပိုပြီးပေါ်လွင်စေသည်မျိုး အယူအဆကို ဝေဖန်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်သည်။
အထက်ပါ IELTS စစ်ဆေးပုံစစ်ဆေးနည်း နှစ်မျိုးရှိသည့်အပြင် နောက်ထပ် အခြားသော IELTS စစ်ဆေးပုံစစ်ဆေးနည်းလည်း ရှိနေပါတည်းသည်။
IELTS for UKVI ( ဗြိတိန်နိုင်ငံ ပြည်ဝင်ခွင့်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ဗီဇာလျှောက်ထားရန်မှာ
အသုံးပြုလေ့ရှိခြင်းအတွက် IELTS စစ်ဆေးရေးစာမေးပွဲ)
ဤ IELTS စစ်ဆေးခြင်းအမျိုးအစားသည် ပုံမှန်စစ်ဆေးသည် IELTS နှင့် အားလုံးနီးပါးတူညီပြီး Academic နှင့် General ဟူ၍ အမျိုးအစားခွဲများ ပါဝင်သည်။ မေးခွန်း ပုစ္ဆာ ပိုင်းမှာ လွယ်ကူခြင်း-ခက်ခဲခြင်း တူညီမှုရှိ၍ မတူညီသော အချက်မှာတော့ မိမိရလဒ်အမှတ် ထုတ်ပြန် ကြေညာရာမှာ အနည်းငယ်သာကွာခြားသည်။ အဲဒီလိုဖြစ်ရခြင်းမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲစစ်ဆေးရေးနေရာတွင် IELTS ကိုဝင်ရောက်ဖြေဆိုခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ပြည်ဝင်ခွင့်လိုရန်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း နှင့် ဗီဇာလျှောက်ထားရန်အတွက် ထိုရမှတ်ကို အသုံးပြုရစေအောင် ခိုင်မာလုံလောက်သည့်အဆင့်ဖြစ်ပါသည်။
Life Skills မျိုးဖြစ်တဲ့ IELTS စစ်ဆေးမှုမျိုးမှာဆိုလျှင် ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံအဖွဲ့များဘက်မှ စံသတ်မှတ်စည်းမျဉ်ချက်အရ မိမိအင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားပြော(Speaking) နှင့် နားထောင်ခြင်း(Listening) အစွမ်းကိုသိလိုသော စွမ်းရည်စစ်ဆေးခြင်း(CEFR)ဟူ၍ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာလျှောက်ထားရန်မှာ အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး စစ်ဆေးရေးအမျိုးအစားအဆင့် (2)ဆင့် ရှိပါသည်။
IELTS Life Skills A1 သည် မိမိအင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားပြော(Speaking) နှင့် နားထောင်ခြင်း(Listening) အစွမ်းကိုသိလိုသော စွမ်းရည်စစ်ဆေးလိုခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုရရန် နှင့် ဗီဇာလျှောက်ထားရန်မှာ အချက်အလက်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ဌာနေအမြဲတမ်းနေထိုင်သူမိသားစုအတွက် သင့်တော်သည့် စစ်ဆေးခြင်းအဆင့်ဖြစ်ပါသည်။
IELTS Life Skills B1 သည် မိမိအင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားပြော(Speaking) နှင့် နားထောင်ခြင်း(Listening) အစွမ်းကိုသိလိုသော စွမ်းရည်စစ်ဆေးလိုခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုရရန် နှင့် ဗီဇာလျှောက်ထားရန်မှာ အချက်အလက်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံ့သားတို့အတွက် သင့်တော်သည့် စစ်ဆေးခြင်းအဆင့်ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ IELTS စစ်ဆေးခြင်းအမျိုးမျိုးကို စိတ်ဝင်စားဝင်ဖြေလိုသည့်အတွက် ယင်း၏အကြောင်းအရာ စာမေးပွဲကြေး နှင့် စာမေးပွဲကျင်းပဖြေဆိုချိန်အပိုင်း မှ စာမေးပွဲဝင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ဖြေဆိုခြင်းနည်းတို့ကို မည့်သို့လေ့လာနိုင်သနည်း။
ပုံမှန်အာဖြင့် IELTS ဖြေဆိုရာမှာ နိုင်ငံတကာအဆင့်စာစစ်ဌာန (2)ခုတွင်ဖြစ်သော ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ British Council နှင့် သြစတြေးလျမှ IDP စာစစ်ဌာနတို့ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာစစ်ဌာနနှစ်ခုသည် ယေဘုယျအဖြင့် စံချိန်စံနှုန်းအတိုင်းစစ်ဆေးခြင်းတူညီပါပြီး ကွဲပြားချက်ကတော့ တစ်နေရာနှင့် တစ်နေရာ British လိုအသံဝဲနေခြင်း (British Accent) နှင့် Australian လိုအသံဝဲနေခြင်း (Australian Accent) အနည်းငယ် ကွဲပြားမှုရှိပါသည်။ ဤသို့ကြောင့် စာမေးပွဲကို မှတ်ပုံတင်ဝင်ရောက်ဖြေဆိုချင်သူအတွက် ကိုယ်နှစ်သက်ရာ စာစစ်ဌာနတစ်ခုချင်းစီး၏အွန်လိုင်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကနေ မှတ်ပုံတင် တင်နိုင်ပါသည်။ စာစစ်ဌာန နှစ်နိုင်ငံ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် စာမေးပွဲကျင်းပချိန် နှင့် စာမေးပွဲကြေး စသည့်အကြောင်းအရာတို့ကို သိရှိလိုပါက အောက်ပါ လင့်ခ်တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
စာမေးပွဲရမှတ်သည် ဘယ်နှစ်နှစ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲ၊ စာမေးပွဲရမှတ်ကို အချိန်ဘယ်လောက်ကြာအောင် သိနိုင်မှာလဲ။
IELTS စာမေးပွဲရမှတ်သည်2နှစ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုပြီးချိန်2ပတ်အကြာလောက်မှာ အမှတ်စာရင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာထားပါမည် ဖြစ်သည်။
အကြောင်းအရာ IELTS British Council IELTS IDP
စာစစ်ဌာန၏ယေဘုယျအချက်အလက် ဗြိတိန်မှစာစစ်ဌာနအဖွဲ့ သြစတြေးလျမှစာစစ်ဌာနအဖွဲ့
မေးခွန်းစစ်ဆေးသည့် အပိုင်းကဏ္ဍ 1. IELTS Academic
စစ်ဆေးသည့်ပုံစံ 1. စက္ကူစာရွက်ပေါ်တွင်အဖြေဖြေဆိုရန်
2. ကွန်ပျူတာတွင်အဖြေဖြေဆိုရန် (စကားပြောဖြေဆိုခြင်းအပိုင်းမှလွဲ၍-စကားပြောဖြေဆိုရာမှာ စစ်ဆေးရေးလူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တွေ့ဆုံစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။) 1. စက္ကူစာရွက်ပေါ်တွင်အဖြေဖြေဆိုရန်
2. ကွန်ပျူတာတွင်အဖြေဖြေဆိုရန် (စကားပြောဖြေဆိုခြင်းအပိုင်းမှလွဲ၍-စကားပြောဖြေဆိုရာမှာ စစ်ဆေးရေးလူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တွေ့ဆုံစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
စာရင်းသွင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း 1.နိုင်ငံအသီးသီးမှ British Council ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင် တင်ပြီး စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်သည်။ အောက်ပါဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် အချက်အလက်ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
2. ဖောင်ပုံစံဖြည့်၍ စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုရန် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး မိမိနီးစပ်ရာ British Council စာစစ်ဌာနကိုဆက်သွယ်ပေးပါ။
ဖောင်ပုံစံဒေါင်းလုပ်ရယူရန် https://www.ielts.org/book-a-test/how-do-i-register 1. နိုင်ငံအသီးသီးမှ IDP ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင် တင်ပြီး စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်သည်။ အောက်ပါဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် အချက်အလက်ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ https://www.ieltsessentials.com/global/registerforyourtest
2. ဖောင်ပုံစံဖြည့်၍ စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုရန် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး မိမိနီးစပ်ရာ IDP စာစစ်ဌာနကိုဆက်သွယ်ပေးပါ။
စကားပြောအပိုင်း စစ်ဆေးသူ အမိစကားပြောပုဂ္ဂိုလ် (British Accentကိုသုံးခြင်း) အမိစကားပြောပုဂ္ဂိုလ် (Australian Accentကိုသုံးခြင်း)
မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါဇယား နှိုင်းယှဉ်ချက်သည် တူညီမှု နှင့် ကွဲပြားမှုကို ခြုံငုံကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းပဲ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိ British Council စာစစ်ဌာနနှင့် IDP စာစစ်ဌာနတို့၏ စစ်ဆေးမှုပိုင်းမှာ အနည်းငယ် ကွဲပြားမှုများတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ- British Council နှင့် IDP တို့၏ ကွဲပြားသော စာစစ်ဌာနကို သုံးစွဲသွားခြင်းမျိုး၊ British Council နှင့် IDP တို့၏ အမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာရာတွင် အချို့သောအဆင့်မှာလည်း ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ခြင်း၊ များသောအားဖြင့် စာစစ်ဌာန နှစ်ခုလုံးသည် စံချိန်စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက် အတိုင်း နည်းအတူဖြစ်နေရပါမည်။ အထူးသဖြင့် မေးခွန်များ၊ စစ်ဆေးရာသုံးကိရိယာပစ္စည်းများ၊ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းစနစ်များ စသည်တို့သည် စံချိန်စံနှုန်းအတိုင်း တန်းတူဖြစ်စေရပါမည်။